Imbali yePhoto: I-Pinholes kwi-Digital Images
UkuPapashwa njengendlela ephakathi kweminyaka engama-200 ubudala. Kodwa kwilo xesha elifutshane lembali, liye lavela kwinkqubo engacatshulwayo usebenzisa iikhemikhali ezinobungozi kunye neekhamera ezinobunzima kwindlela elula kodwa eyinkimbinkimbi yokudala nokwabelana ngemifanekiso kwangoko. Fumana indlela ufoto lwezithombe ezitshintshile ngayo ixesha kunye nekhamera zibukeka njani namhlanje.
Iikhamera zokuqala zazisetyenziselwa ukudala imifanekiso kodwa ukufunda i-optics.
Umfundi waseArabhu u-Ibn Al-Haytham (945-1040), owaziwa nangokuthi ngu-Alhazen, ngokuqhelekileyo ubizwa ngokuba ngumntu wokuqala ukufunda indlela esiyibonayo. Wakha i- camera obscura , i-precursor kwikhamera ye-pinhole, ukubonisa indlela ukukhanya kungasetyenziselwa ngayo ukwenza umzobo kumfanekiso ophezulu. Izikhombisi zangaphambili kwinkcazo yekhamera zifunyenwe kwiimibhalo zesiTshayina ezimalunga ne-400 BC nakwiincwadi zika-Aristotle malunga ne-330 BC.
Phakathi ne-1600s, ngokuveliswa kweelensi ezicwangcisiweyo, abaculi baqalisa ukusebenzisa i-camera obscura ukuba bancede benze kunye nokupenda imifanekiso yehlabathi yangempela. Iilwimi zobukhanyisi, i-forerunner yeprojekti yangoku, kwakhona yaqala ukubonakala ngeli xesha. Ukusebenzisa imigaqo efanayo ye-optical njenge-camera obscura, ilanga lomlingo lavumela abantu ukuba benze iifayile zeprojekthi, ngokuqhelekileyo zidwetshwe kwiilayidi zeglasi, kwiindawo ezinkulu. Ngokukhawuleza baba yinto eyaziwayo yokuzonwabisa.
Isazi senzululwazi waseJamani uJohn Heinrich Schulze senze iimvavanyo zokuqala ngeekhemikhali ezinobungakanani beefoto ngo-1727, ezibonisa ukuba isilivere zesilivere zazingenakukhanya.
Kodwa uShulhul akazange azame ukuvelisa umfanekiso osisigxina usebenzisa ukufunyanwa kwakhe. Oku kuya kufuneka kulinde kude kube yinyanga elandelayo.
Ngomhla wehlobo ngo-1827, isazi sesayensi saseFransi uJoseph Nicephore Niepce senza umfanekiso wesithombe sokuqala nge-camera obscura. U-Niepce wabeka i-engraving kwi-plate yeritye efakwe kwi-bitumen kwaye yabonisa ukuba ikhanyise.
Imimandla enomthunzi wokubhaliweyo ekukhanyeni ukukhanya, kodwa iindawo ezimhlophe zivumelekile ukuba zisebenze kunye neekhemikhali kwi-plate.
Xa uNiepce wabeka iplate yensimbi kwi-solvent, ngokukhawuleza kwavela umfanekiso. Ezi zi-heligrafu, okanye i-sunprints njengoko zibizwa ngezinye iixesha, zibhekwa njengeyokuqala kwiimifanekiso ezifoto. Nangona kunjalo, inkqubo kaNiepce yayidinga iiyure ezisibhozo zokukhanyisa ukukhanya ukudala umfanekiso oza kuphelela. Ukwazi "ukulungisa" umfanekiso, okanye ukuwenza unaphakade, weza kamva.
Omnye ongumFrentshi uLouis Daguerre naye wayezama iindlela zokubamba umfanekiso, kodwa kwakuza kumthatha iminyaka emibini ngaphambi kokuba akwazi ukunciphisa ixesha lokungena kwixesha elingaphantsi kwemizuzu engama-30 kwaye ugcine umfanekiso ungapheli emva koko. Izazi-mlando zikhankanya lo mbonakalo njengendlela yokuqala yokwenza iifoto. Ngomnyaka we-1829, wabumba ubambiswano kunye noNiepce ukuphucula inkqubo yeNikoce eyayiyenzile. Ngowe-1839, emva kweminyaka emininzi yokulinga kunye nokufa kukaNiepce, iDaguerre yavelisa indlela elula kwaye iphumelelayo yokufotoza kwaye yabiza emva kwayo.
Inkqubo yedaguerreotype yeDaguerre iqalile ngokulungisa imifanekiso kwiphepha lesibethusi esiliva. Emva koko wayiphosa isilivere waza wayifaka nge-iodine, edala ubuso obunokukhanya.
Emva koko wabeka isitya kwindawo yekhamera kwaye wayibhenca imizuzu embalwa. Emva kokuba umfanekiso udwetshwe ngokukhanya, iDaguerre yahlamba isitya kwisisombululo se-chloride yesiliva. Le nkqubo yenze umfanekiso ohlala ungaphenduliyo xa ukhankanywe ekukhanyeni.
Ngowe-1839, unyana kaDaguerre kunye noNiepce wathengisa amalungelo e-daguerreotype kurhulumente waseFransi waza wapapasha incwadana echaza inkqubo. I-daguerreotype yafumana ukuthandwa ngokukhawuleza eYurophu nase-US Ngo-1850, kwakukho ii-studios ezingama-70 ze-daguerreotype eNew York City yodwa.
Ukungalungi kwiNkqubo efanelekileyo
Umda we-daguerreotypes kukuba awunakuphinda uphinde uvelise; ngamnye ngumfanekiso oyingqayizivele. Ikhono lokwenza iimifanekiso ezininzi zaza zathokoza ngomsebenzi kaHenry Fox Talbot, isityalo se-botanist yesiNgesi, isazi semathematika kunye nexesha elidlulileyo leDaguerre.
UTalbot wazisa iphepha ekukhanyeni usebenzisa isisombululo sesiliva esiliva. Emva koko wabonisa ukuba iphepha likhanyise.
Imvelaphi yaba mnyama, kwaye isihloko senziwa ngokubaluleka kwegrey. Lo wawungumfanekiso ombi. Ukususela kwiphepha elibi, uTalbot wenza iimifanekiso zokudibanisa, ukuguqula ukukhanya kunye nezithunzi ukudala umfanekiso ocacileyo. Ngomnyaka we-1841, waphumelela le nkqubo ye-paper-negative and called it calotype, isiGrike "ngomfanekiso omhle."
Ezinye iinkqubo zokuqala
Phakathi ne-1800s, izazinzulu kunye nabafoto beefoto bazama iindlela ezintsha zokuthatha kunye nokucwangcisa imifanekiso ebenempumelelo. Ngo-1851, uFrederick Scoff Archer, umdwebi wesiNgesi, waqulunqa i-plate-wet-plate. Ukusebenzisa isisombululo se-collodion (i-chemical-based-alcohol-based based chemicals), wayegqoke ingilazi kunye neetyuti zesilivere ezivuthayo. Ngenxa yokuba yayiyiglasi kwaye ingeyiphepha, le ndawo yesikhombi samanzi yenze i-negative and detailed details.
Njenga-daguerreotype, i-tintypes iqeshwe iiplates zetsimbi ezincinci ziboshwe ngeekhemikhali ezibonakalayo. Inkqubo, ilungelo lobunikazi ngo-1856 nguNzululwazi waseMerika uHamilton Smith, wasebenzisa isinyithi endaweni yobhedu ukuveza umfanekiso ontle. Kodwa zombini iinkqubo kwakufuneka ziphuhliswe ngokukhawuleza ngaphambi kokuba ummila wamiswa. Kwintsimi, oku kuthetha ukuthwala i-darkroom ephathekayo egcwele iichiza ezinobuthi kwiibhotile ze-glass glass. Ukufotwa kwakungekho yintliziyo epholileyo okanye abo bahamba ngokulula.
Olu tshintshile ngo-1879 kunye nokuqaliswa kweplani eyomileyo. Njengomfanekiso-mzobo wethambile, le nkqubo isebenzisa iplastiki engenanto yokubamba umfanekiso.
Ngokungafani nenkqubo ye-plate-plate, iiplate ezomileyo zambethe nge-gelatin emulsion eyomileyo, oku kuthetha ukuba ingagcinwa ixesha elide. Abafaki-zithombe babengasayi kufuna amabala omnyama kwaye ngoku bangaqeshisa abachwephesha ukuphuhlisa iifoto zabo, iintsuku okanye iinyanga emva kokuba imifanekiso idutshulwa.
IFlexible Roll Film
Ngowe-1889, umculi wezithombe kunye nomsebenzi wezezimboni uGeorge Eastman waqulunqa ifilimu ngesiseko esasiguquguqukayo, esingenakuqhekeka, kwaye singasungulwa. I-emulsions eboshwe kwisiqulatho sefilimu ye-nitrole ye-cellulose, efana ne-Eastman's, yenze ibhokisi yekhamera ekhiqizwa ngobuninzi. Iikhamera zokuqala zisebenzisa imilinganiselo yefilimu eyahlukeneyo ephakathi, kuquka i-120, 135, 127, kunye ne-220. Zonke ezi zifomathi zazingama-6cm ububanzi kwaye zivelise imifanekiso eyahlukileyo ukusuka kwirexeni ukuya kwisikwere.
Ifilimu engama-35mm abaninzi abantu bayayazi namhlanje yenziwe ngu-Kodak ngowe-1913 kwimboniso yesikhumbuzo sokuqala. Phakathi ne-1920s, umenzi wekhamera waseJamani uLeica wasebenzisa le teknoloji ekwenzeni yokuqala ikhamera esetyenziswe ifomati ye-35mm. Ezinye iifomati zefilimu nazo zacetyiswa ngeli xesha, kubandakanywa ifilimu yokupasa ifomathi kunye nokuxhasa iphepha elenza kube lula ukulawula emini. Ifilimu yecatshulwa kwii-4-by-5-intshi kunye no-8-by-10-intshi ubukhulu buye baqheleka, ngokukodwa kwimifanekiso yokuthengisa, ekugqibeleni isidingo samacwecwe eilasi.
Impendulo yefilimu esekelwe kwi-nitrate yukuthi yayivuthayo kwaye yayilungeleka ngokuhamba kwesikhathi. I-Kodak kunye nabanye abavelisi baqalisa ukutshintshela kwisiseko se-celluloid, esasingenakuvutha umlilo kunye nokuzinzileyo, kuma-1920.
Ifilimu eyahlukileyo yafika kamva kwaye yayigxininise kwaye iguquguquke, kunye ne-fireproof. Uninzi lwamafilimu aveliswa ukuya kuma-1970 lwalusekelwe kule teknoloji. Ukususela kuma-1960, iipolymeri ze-polyester ziye zasebenziswa kwiifilimu ze-gelatin. Isiseko sefilimu yeplastiki isisigxina kakhulu kune-cellulose kwaye asiyingozi yomlilo.
Kwiminyaka yokuqala yee-1940, iifrimu zeempawu zentengiso zithengiswa kwimarike ngu-Kodak, Agfa kunye nezinye iinkampani zefilimu. Ezi ifilimu zisetyenziswe iteknoloji yanamhlanje yemibala edibeneyo yedayi apho inkqubo yeekhemikhali idibanisa le mibala emithathu yedayi kunye nokwenza umbala obonakalayo wombala.
Ngokwesiko, iimpapu zeelagi zelinen zazisetyenziselwa njengesiseko sokwenza iifoto zemifoto. Ukuprintwa kweli phepha elisekelwe kwifayibhile eliboshwe nge-gelatin emulsion lizinzile xa liqhutywe kakuhle. Ukuzinza kwabo kuphuculwa xa ukuprintwa kuthathwa nge-sepia (i-brown tone) okanye i-selenium (i-tone, i-silvery tone).
Eli phepha liya kumisa kwaye liqhekeke phantsi kweemeko zokugcinwa kobuhlwempu. Ukulahleka komfanekiso kunokuba kungenxa yokunyuka kwamanzi, kodwa intshaba yephepha yindawo yamachiza eshiywe yi-photo fixer, isisombululo seekhemikhali esityhulwa ukususa okusanhlamvu kwiifilimu kunye neempendulo ngexesha lokucubungula. Ukongezelela, ukungcola kwamanzi asetyenziselwa ukucoca nokuhlamba kungabangela umonakalo. Ukuba umshicilelo awuhlanjululwanga ngokupheleleyo ukuba ususe yonke imizila ye-fixer, umphumo uya kuguqulwa kunye nokulahleka komfanekiso.
Intsha elandelayo kwiphepha lezithombe ezifake iifoto zenziwe nge-resin-paper or paper-resistant paper. Ingcamango yayiwukuba isebenzise iphepha eliqhelekileyo le-fiber-based paper kwaye yembethe ngezinto zeplastiki (i-polyethylene), okwenza iphepha elinganyangekiyo. I-emulsion isetyenziswe kwiphepha leplastiki elisezantsi. Ingxaki ngamaphepha aphethwe yi-resin yinto yokuba umfanekiso ugibela kwiingubo zeplastiki kwaye ulungele ukukhula.
Ekuqaleni, imibala yemibala yayingagcinanga ngoba idayi yezinto eziphilayo zazisetyenziselwa ukwenza umbala wombala. Umfanekiso wawuya kutshabalalisa ngokoqobo kwifilimu okanye kwiphepha lephepha njengoko idayi yahlaselwa. I-Kodachrome, eyayithandana neyokuqala yesithathu yekhulu lama-20, yayingumfanekiso wokuqala wemibala ukuvelisa iziprints eziza kuhlala iminyaka engama-50. Ngoku, amatsha amatsha akha iinguqu zemibala engapheliyo edlulileyo iminyaka engama-200 okanye ngaphezulu. Izindlela ezintsha zokushicilela usebenzisa imifanekiso yedijithali eyenziwe ngekhomputha kunye namabala e-pigment azinzileyo anikezela isigxina kwimifanekiso yebala.
Ukufota kweso sithuba kwakhiwa ngu- Edwin Herbert Land , umvelisi waseMelika kunye ne-physicist. Umhlaba wawusele uwaziwa ngokuba ngumsebenzi wokuphayona ngamapolym avelele ekukhanyeni ukuvelisa ii-lens. Ngomnyaka we-1948, wabonakalisa ikhamera yakhe yokuqala yekhamera, i-Land Camera 95. Kwiminyaka emininzi ezayo, i-Land's Polaroid Corporation iya kucoca ifilimu emnyama neyemhlophe kunye neekhamera ezikhawulezileyo, ezincinci, kwaye zincomeke ngokugqithiseleyo. I-Polaroid yazisa ifilimu yombala ngo-1963 kwaye yakha ikhamera ye-SX-70 yokunyathela ngo-1972.
Abanye abenzi befilimu, oko kukuthi i-Kodak noFiji, bazisa zabo iinguqulelo zefilimu esheshayo kuma-1970 kunye nama-80s. I-Polaroid yahlala yinto ephawulekayo, kodwa ekufikeni kweefoto zedijithali kuma-1990, yaqala ukuhla. Inkampani efakwe kwi-bankruptcy ngo-2001 kwaye yayeka ukwenza ifilimu yangekho mzuzu ngo-2008. Ngo-2010, iProjekthi engenakwenzeka yaqalisa ukuvelisa ifilimu esebenzisa iifomati ze-polaroid ze-instant-film, kwaye ngo-2017, inkampani yazibuyisa njenge-Polaroid Originals.
Ngenkcazo, ikhamera yinto engenakukhanyisa kunye ne-lens eyenza ukukhanya okungenayo kwaye iqondise umfanekiso okhanyayo kunye nomphumo obonayo kwifilimu (ikhamera ebonakalayo) okanye kwisixhobo sokucinga (ikhamera yedijithali). Iikhamera zokuqala ezisetyenziselwa kwinkqubo ye-daguerreotype zenziwe ngabagqirha bezobugcisa, abenzi bokusetyenziswa kwezixhobo, okanye ngamanye amaxesha nakwabathwebuli bezithombe.
Iikhamera ezithandwa kakhulu zisebenzisa i-slide-box design. I-lens yafakwa kwibhokisi yangaphambili. Okwesibini, ibhokisi elincinci litshintshelwe emva kwebhokisi enkulu. Ugxininiso lwalulawulwa ngokushenxisa ibhokisi elingemuva phambili okanye ngasemva. Umfanekiso oguqulwa ngokulandelelana wawuza kufumaneka ngaphandle kokuba ikhamera ifakwe kwisibuko okanye i-prism ukulungisa le mpawu. Xa isitya esichukumisiweyo sabekwa kwikhamera, isilathisi se-lens sasiya kususwa ukuqala ukutyhila.
Ukugqibelela ifilimu yomqulu, uGeorge Eastman naye waqulunqa ikhamera eboshwe ngebhokisi eyayilula ngokwaneleyo ukuba abathengi basebenzise. I-$ 22, i-amateur ingathenga ikhamera enefilimu eyaneleyo yeempuphu eziyi-100. Emva kokuba ifilimu isetyenziswe phezulu, umfaki-zifowuni wathumela ikhamera kunye nefilimu ehlala kuyo kwipshini ye-Kodak, apho ifilimu isuswe kwikhamera, iqhutywe, iphrintiwe. Ikhamera yaphinda ilayishwa kwakhona ngefilimu yabuya. Njengoko i-Eastman Kodak Inkampani yathembiswa kwiintengiso ukususela ngeli xesha, "Cinezela iqhosha, siya kwenza konke."
Kwiminyaka emininzi elandelayo, abakhiqizi abaziintloko ezifana ne-Kodak e-US, iLeica eJamani, kunye ne-Canon kunye ne-Nikon eJapan bonke baya kuzisa okanye bahlakulele amafomathi amakhulu ekhamera asetyenziswa namhlanje. ULeica wasungula okokuqala ikhamera ukusebenzisa ifilimu engama-35mm ngo-1925, ngelixa elinye ikhampani yaseJamani, iZeiss-Ikon, yazisa ikhamera yokuqala ye-lens yenkomfa ngo-1949. .
Iingcambu ze-digital photography, eziza kuguqula i-shishini, zaqala ngokuphuhliswa kweso sixhobo se sibini sase-Bell (1965) kwiCell Labs. I-CCD iguqula ukukhanya kumqondiso we-elektroniki kwaye ihlala isentliziyo yesicatshulwa. Ngowe-1975, iinjineli zase-Kodak zakha ikhamera yokuqala yokudala umfanekiso wesigodi. Yasebenzisa i-cassette irekhoda ukugcina idatha kwaye ithatha imizuzwana engama-20 ukuba ifake isithombe.
Phakathi nama-1980, iinkampani eziliqela zazisebenza kwiikhamera zedijithali. Omnye wabokuqala ukubonisa umboniso obonakalayo yi-Canon, eyabonakalisa ikhamera yedijithali ngo-1984, nangona yayingakaze ifakwe kwaye ithengiswe ngentengiso. Ikhamera yokuqala yedijithali ethengiswayo e-US, i-Dycam Model 1, yabonakala ngo-1990 kwaye yathengiswa ngama-600 ayi-600. I-SLR yokuqala ye-digital, umzimba we-Nikon F3 oqhotyoshelwe kwiyunithi yokugcina eyahlukeneyo eyenziwe ngu-Kodak, yabonakala unyaka olandelayo. Ngo-2004, iikhamera zedijithali zazingabhengekanga iikhamera zefilimu, kwaye idijithali ngoku iphezulu.
Iibhonkco kunye ne-Flashbulbs
I-Blitzlichtpulver okanye ipowsi ye- flashlight yasungulwa eJamani ngo-1887 ngu-Adolf Miethe kunye noJohannes Gaedicke. I-Lycopodium powder (i-spox spores evela kwi-club moss) yayisetyenziswa kwipoyipi yokuqala. I-bulb ye-photoflash yokuqala okanye i-flashbulb yakhiwa ngu-Austrian Paul Vierkotter. I-Vierkotter isebenzisa i-wire magnesium ecwecwe kwiglasi ye-glass. Intambo ekhutshwe nge-magnesium yatshatyalaliswa ngokukhawuleza yi-aluminium foil kwi-oksijeni. Ngomnyaka we-1930, i-bulb ye-photoflash yokuqala yokuqala yezorhwebo, i-Vacublitz, yayinelungelo lobunikazi nguJamani Johannes Ostermeier. I-General Electric iphinde iphule idayibhu ebizwa ngokuba yiSashalite malunga nexesha elifanayo.
Umqambi wesiNgesi kunye nomenzi uFrederick Wratten wasungula enye yeenkampani zokuqala zokubonelela ngeefoto ngo-1878. Inkampani, iWratten kunye neWainwright, yenziwe yathengisa iiplitedi zeglasi kunye ne-gelatin ezomileyo. Ngowe-1878, uWratten waqulunqa "inkqubo yokuhlaziya" yesilivere-bromide emulsions ngaphambi kokuhlamba. Ngomnyaka we-1906, iWratten, ngoncedo lwe-ECK Mees, yaqulunqa kwaye yavelisa iiplani zokuqala ezise-panchromatic eNgilani. I-Wratten iyaziwa ngokucacileyo kwiifayile ezifake iifoto ezenzileyo kwaye zisaphinda ziqanjwe ngaye, i-Wratten Filters. U-Eastman Kodak wathenga inkampani yakhe ngo-1912.
Yintoni i-Pendentive? Ubunjineli beDome
I-Admission College yasePaul Quinn
I-Top 10 uJohn Jones ukunqoba
Iprojekthi Yemozulu: Indlela Yokubonakalisa Umoya Unomqulu (Uthatha Indawo)
I-Large Hadron Collider kunye neFrontier of Physics
Uthando lweCanscer and Capricorn Uthando